Air Partner achiendesa rubatsiro rwekubatsira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air Partner achiendesa rubatsiro rwekubatsira
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Zimbabwe Breaking News • nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Air Partner inoendesa zvinhu zvekuyamura nerubatsiro kune avo vanoshaya gore rese.
Air Partner's Freight timu yanga yakabatikana zvikuru muna 2018, ichiendesa zvinhu zvekuyamura nerubatsiro kune avo vanoshaya pasi rese. Misangano yaisanganisira nendege pakati peEurope neLibya, Yemen, Central Africa, pamwe nepakati penyika dzakasiyana siyana dzeAfrica uye kubva kuUS kuenda kuMariana Islands muPacific.
Huru hukuru hweichi chiitiko chakaitika mukati megore rino dutu remhepo uye mukupindura Madutu Mangkhut neYutu, ayo Air Partner akaronga kutakurwa uye kuendeswa kwematani anopfuura zviuru zviviri zvezvinhu zvekuyamura kubva kuUS kuenda kuGuam neSaipan kuNorth Mariana Zvitsuwa.
MunaGunyana, Air Partner akasangana neRadiant Global Logistics kubatsira nekubatsira nekukurumidza nekuendesa zvinhu kuGuam mukugadzirira Super Typhoon Mangkhut. Air Partner yakaita ndege dzinoverengeka paAN-225 uye AN-124 ndege kuti dzibatsire kufambisa zvekuyamura zvinokurumidza, zvinosanganisira mvura nezvikafu zvakagadzirira kudya (MRE).
Wiley Knight, director weHumanitarian Aid yeRadiant Global Logistics, akati: “Kuburikidza nerutsigiro uye nemhando yepamusoro yebasa rinopihwa neAir Partner, takakwanisa kuzadzisa zvirongwa izvi mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekunge dutu rapfuura. Kudyidzana kwedu pamwe nekunzwisisa kunokosha kwekukasira kupindura ndizvo chaizvo zvataida kuzadzisa mamishini edu. "
Mwedzi wakatevera, mumashure meSuppupon Yutu, Air Partner akapihwa basa rekutakura zvinhu zvakawanda zvekubatsira uye zvinorema-zvekushandisa kuvaka patsva chitsuwa cheSaipan. Chikwata chakaunganidza nekukurumidza uye kubudirira kupedzisa dzinopfuura makumi matatu ndege mumazuva asingasviki makumi matatu dzichishandisa AN30 neB30F ndege.
Kubhururuka nhumbi kuenda kunzvimbo iri kure kwanga kwakanyanya kunetsa, uye nekuda kwehukuru hweyesimba rekuyedza pamwe nehoriyamu yekubhururuka yakaitwa, Air Partner yakamisa nhengo yechikwata chayo pachitsuwa cheGuam kuti vazvibatanidze vega sangano, kuendesa uye kurodha yezvose zvinotakura kubva kune akasarudzwa wekutakura zvinhu weFederal Emergency Management Agency (FEMA) nenzira yakakodzera, pasina kunonoka. Izvi zvakagonesa Air Partner kuendesa yakanyanya basa charter charter sevhisi kune wayo mutengi panguva ino yakaoma.
Mike Hill, Director weFreight kuAir Partner, akati: “Munguva yedambudziko, tiri shamwari inovimbwa nevatengi vakasiyana siyana. Munguva yegore renjodzi dzinongoitika dzoga dzakadai dzinoparadza, ndinovonga timu yeFreight nekuedza kwavo kusaneta kuwana rubatsiro runodiwa kune avo vanoshaya, nekukurumidza sezvinobvira. ”